Gameduino 2 inhoo yekushandura Arduino kuita mutambo weconso | Linux Vakapindwa muropa
Gameduino 2: vhezheni nyowani yenhoo iyi yeArduino
Gameduino 2 Iyo ndiyo vhezheni nyowani yenhovo (chishongedzo) che Arduino, iyo inoshandura yedu Arduino kuita 8-bit vhidhiyo mutambo koni mumanyorerwo ekare NES, SEGA Master System uye inozivikanwa Atari 2600. Nayo, VGA vhidhiyo kuburitsa ye400 × 300 pixels uye 12-bit kurira kunowanikwa thanks kune yayo synthesizer.
ari vagadziri ve projekiti Gameduino vari kutsvaga mari yekunze kuti vakwanise kugadzirisa hardware uye software ye add-on. Zvinotaridza kuti kufarira kwevagadziri kuri kuwedzera, nekuti naGameduino tinoshandura chikuva cheArduino kuita huru yekuvandudza mutambo. Nayo unogona kumhanya mitambo yeRetro nemazita echinyakare atakatamba makore apfuura uye nekugadzira yako wega mitambo nekutenda raibhurari yauinayo.
Kickstarter iri kurwira mutsivi weGameduino, iyo Gameduino 2 kubva kwairi kunotarisirwa kukwidza kupfuura yaakatangira ($ 38.297, kakapetwa kagumi kupfuura pakutanga kwaitarisirwa). Gameduino 2 ichavandudza mifananidzo yebhodhi rapfuura, kutora 32-bit mifananidzo uye 256Kb ye RAM yakatsaurirwa kumagirafu, pamwe nekuwedzera resolution kusvika 480 × 272 px. Ichaperekedzwa ne4.3 "TFT yekubata skrini ine accelerometer, MicroSD kadhi uye odhiyo kuburitsa. Vagadziri vacho vanosanganisirawo akawandisa emanyowani kuitira kuti avo vanoshuvira kugadzira mitambo kana kuita zviedzo zvavo nazvo vane zvese zvakanyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Gameduino 2: vhezheni nyowani yenhoo iyi yeArduino
Pipelight, ndiyo inoshanda nzira yekushandisa Netflix paLinux
Maitiro ekugadzira iyo account account muUbuntu